IBundoora, ivillage efudumeleyo yosapho olunye kwisithili saseMelbourne ekumntla-mpuma, enamagumbi acocekileyo nacocekileyo, amaziko apheleleyo, izithuthi ezifanelekileyo, i-intanethi enesantya esiphezulu, kunye neebhedi eziphezulu!
Igumbi lakho lokulala e indlu enendawo yokuphola sinombuki zindwendwe onguSteven 攀
Sinikezela ngeetawuli ezicocekileyo nezibulala iintsholongwane kunye neslippers kuzo zonke iindwendwe. Iibhedi zonke zicocekile kwaye zibulawa zintsholongwane ngokunjalo.Igumbi nalo liye lacocwa ngokupheleleyo.
Emva koko, ngokubanzi, zonke izixhobo ezisendlwini zisetyenziswe simahla.Njengezinto zokupheka ekhitshini, izibonelelo zokuhlamba, iTV, i-WIFI, isomisi seenwele kunye njl. Konke simahla !!!
Ke, sikwabonelela ngazo zonke iimpahla zekhaya simahla !! Umzekelo, ijeli yokuhlamba izandla, ijeli yokuhlamba izitya, ishampu, isilungisi, ubisi lokuhlamba umzimba, iphepha lendlu yangasese, umgubo wempahla, isithambisi, isibulali ntsholongwane, njl njl.Konke simahla !!!
Ke, sikwanomcoci ozinikeleyo oza rhoqo ngeveki ukucoca kunye nokubulala iintsholongwane kwiindawo zokwabelana.Ke, sihlala sizama konke okusemandleni ethu ukugcina yonke indlu icocekile kangangoko. Ukucoceka kwendawo esihlala kuyo isoloko ikuluhlu lwethu oluphambili.:)
Sizama konke okusemandleni ethu ukubonelela ngenkonzo elungileyo kulo lonke undwendwe oluza kwindawo yam.
Kuluvuyo lwethu ukuba singakunika indawo yokuhlala elungileyo.
Sijonge ukukubona endlini yam. ^_^ 😊
Umbuki zindwendwe ngu- Steven 攀
USteven 攀 yi-Superhost
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mill Park